Indlela yokusebenzisa i-verb isebenza ngesiSpeb
Isenzi esasetyenziswa kakhulu amaninzi ukubonisa indlela into okanye umntu osebenza ngayo
Isevisi yesenzi yesiSpain ininzi yeentsingiselo "zokukhonza" kodwa isetyenziswe kaninzi kunezenzi zesiNgesi xa ichaza indlela izinto ezisetyenziswa ngayo.
Iingqungquthela zivela kwi- servire yesiLatini, eyaqala ngokubhekisela ekubeni ngumkhonzi okanye ikhoboka. Intsikelelo yalo yokuba yinzuzo yaphuhliswa kamva.
U-Servir uxoxwa ngokungaqhelekanga , usebenzisa umzekelo ofanayo kunye ne- pedir ne- competir . Isiqalo sezinto ezincedisayo kwi- sirv- xa ugxininiswe kwisimo sengqondo kunye nasoloko isetyenziswe ngendlela elula yokuzimela .
Ukutshintshiselwa kweso sikhokelo samanje (isisombululo esisetyenzisiweyo) sisilandelayo: i- sirvo, i-sirves, i-usted / ell / ella sirve, i-nosotros / i-nosotras servimos, i-vosotros servís, i-ustedes / ellos / i-ellas eirven .
Ukusebenzisa umkhonzayo ukubonisa ukusetyenziswa okanye ukufaneleka
Nangona iyakwazi ukuma yodwa, i- servir ilandelwa ngokuphindaphindiweyo ngumboniso wendlela yokubonisa indlela into esetyenziswa ngayo kunye / nokuba yintoni esetyenziswayo okanye eyincedo kuyo. Okungaqhelekanga kusetyenziswa i-form reflexive servirse elandelwa ngu-preposition de .
Imizekelo ngeenguqulelo ezinokwenzeka:
Uze ndibe ngumntu ongenamhlanje. (Ifowuni yam iluncedo kum ukuba ndihlale ndidibanisa nezonxibelelwano zentlalo.)
Las vitaminas sirven para la adecuada función del cuerpo humano. (IiVithamini zisetyenziswe ngokufanelekileyo komzimba womntu.)
Akukho majelo e-servicos, ukuya kwi-servicos para algo. (Akusiyo sonke esilungileyo kuyo yonke into, kodwa sonke sikulungele into ethile.)
Akukho sirve para nada. (Akuncedi nantoni na.)
Le idilesi ye-policía elandelayo ifonti ukuba ibone i-narcóticos ne-explosivos. (Inkulu yamapolisa ifuna inja ezimbini ezazisetyenziselwa ukufumana iziyobisi kunye neziqhumane.)
I-proxy ye-imeyli yokwenza i-servic como ifowuni ye-otras escuelas. (Inkqubo yethu yokhuseleko ingasetyenziswa njengomzekelo kwezinye izikolo.)
U-Esta wachaza ama-alumnos ane-discapacidades grave. (Le klasi isebenza ngabafundi abakhubazekileyo.)
Me serví de la llave para abrir la puerta. (Ndasebenzisa iqhosha lokuvula umnyango.)
I-Muchos oradores i-historian humorísticas para establecer un relación con la audiencia. (Ezininzi izithethi zisebenzisa amabali amnandi ukudibanisa nabaphulaphuli.)
Ukusebenzisa umkhonzayo ukukhusela ukukhonza umntu
Nangona i- servir isoloko iququzelelwe ekhaya njengokuba ithetha ngokutya ukutya, inokusetyenziswa kwiimeko ezahlukeneyo ezibandakanya ukunceda umntu okanye into ethile.
El mesero puso azúcar en las tazas e inmediatamente sirvió el té. (Umgcini wesoti wenza ishukela kwiikomityi kwaye wuleza wakhonza itiye.)
I-Hay varios metodos de servir la mesa. (Kukho iindlela ezininzi zokuseta itafile.)
I-imeyli ye-imeyli ye-imeyile. (Utata wayekhonza emkhosini ngexesha lemfazwe.)
El gobernador idilesi efunwa ngu-servir al pueblo. (Irhuluneli ithi ufuna ukubanceda abantu.)
¿Dónde se sirve el desayuno? (Uphi ukutya kwasekuseni?)
Ndiyisebenzise i-refrigerador. (Ndazinceda ubisi kwiqrijini.)
¿En qué puedo servirte? (Ndingakunceda njani?)
Ukusebenzisa uMkhonza kwiMidlalo
Ezemidlalo apho ibhola inikwa ngesiNgesi ngokuqhelekileyo isebenzisa isebenzi ngeSpanish: Ukuba i-jugador sirvió i-turn turno, yonke i-juego queda anulado.
(Ukuba umdlali usebenza ngaphandle, loo mdlalo ayiyi kubala.)
Indlela yokudibanisa "Ukugqiba" (ukugqiba)
I-Ardas ichazwa: I-Sikh Indlela yokuPhalaza ngokuPhezulu
TOCFL - Uvavanyo lweTshayina njengoLwimi lwangaphandle
O Mio Babbino Caro Iingoma kunye neNguqulelo Yombhalo
Iifayile zePirate zezingane kunye neentsapho
Iinkcukacha ngokukhawuleza kwi-Wa Wa Korea
Ukudweba - Iingcebiso kwiDraphite Pencil Drawing